Ulwazi lwezokwelapha > I-2-Chloro-5-methylpyrimidine: I-CAS (Iinkonzo zeMichiza zeMichiza) Inani leRejista 22536-61-4
Iipropati zePhysical and Chemical 2-Chloro-5-methylpyrimidine
I-2- I-Chloro-5 i-methylpyrimidine ine-powder yellow yellow crystalline ibonakala kwiqondo lokushisa. Abanye baza kuchaza umthunzi wombala njenge-white-off. Akunakho ivumba kunye nesisindo somzimba we-128.56 grams nganye. I-formula yekhemikhali yayo ichazwa njengeC5H5CIN2 kunye ne-Simplified Molecular System - Input Integration System (SMILES) njengeCC1 = CN = C (CL) N = C1. I-compound ine-melting point ephakathi kwe-89-92 degrees centigrade, kunye nendawo yokubilisa ye239 .Izididi ze-2 kwi-750mm / hg. Iqinileyo isincinci emanzini. Ngokuqhelekileyo zenziwe kwaye zithengiswa njengemidiyeza ephakathi kunye neesayiti ephakathi (i-purity) phakathi kwe-97% kunye ne-98%, i-lowest eyaziwayo njenge-95%. Ubuninzi bomlenze omnye we-2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) malunga ne-1.169 igramu nganye kwi-25 degrees centigrade. I-enthalpy ye-vaporization yi-45.68 KJ / mol kunye noxinzelelo lwe-vapor kulinganiswa malunga ne-0.0626 mmHg kwi-25 degrees Celsius. Iintetho eziqhelekileyo ezisetyenziselwa i-2-chloro-5-methylprimidine zi: Pyrimidine, 2-Chloro-5-methylpyrimidine, i-2-chloro-5-methyl- (8Cl, 9Cl) kunye ne-5-methyl-2- chloropyrimidine.
I-2- chloro-5 methylpyrimidine ingaqulunqwa ngokusebenzisa iindlela ezininzi. Isenzo esiqhelekileyo sokulungiselela siyifumene njenge-25% yemveliso ephumela kwimpendulo phakathi kwe-phosphorus oxychloride kunye ne-3-methylpyridine 1-oxide. Nangona kunjalo, ukufumana isivuno esiphezulu nakakhulu, i-2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) ingalungiselelwa ngokuphendula i-phosphorus oxychloride kunye ne-3-methylpyridine 1-Oxide. Ukuphuculwa kukuquka ukufezekisa impendulo kunye ne-organic nitrogen ekhoyo kunye ne-diluent (mhlawumbi i-solvedent organic solvent) yonke eyenziwa kwiqondo lobushushu phakathi kwama-degree angama -50 kunye ne-50 degrees Celsius. Izivuno ze-70% zingafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo. Izivuno zeengxelo ze-96% nazo ziye zabhalwa, nangona ezi zinto zingonakaliseki ukuba kunzima ukugqithisa, ukwenza ukusetyenziswa, ngokukodwa kwinqanaba elikhulu elingenakwenzeka. Ukukhethwa kwindlela yokulungiselela ekhethiweyo kunokuchaphazeleka ngumlinganiselo lowo ufuna ukuvelisa kunye nokuhlengahlengiswa kwamanye ngemveliso. Nangona kunjalo, ngokuxhomekeke ekusebenziseni kwakho okugqithiseleyo kwimveliso, unokuhlala ufumana inkqubo esetyenziselwa ukulungiselela, okanye ukhethe indlela efanelekileyo ongathanda ukuyisebenzisa xa ulungiselela ukulungiselela.
Yintoni kanye iPirramidine?
Ukubeka nje, ziimveliso eziqholiweyo kunye nee-carbon kunye ne-nitrojeni i-atom kwisalathisi sesithandathu. Ingcango ifanelekile. Iimveliso ezivela kwiPyramidine, sele zidlale indima ebalulekileyo ekuphuhliseni iziyobisi ngokwazo okanye ngokudibanisa nezinye iimveliso. Ziye zasetyenziswa, kwaye ziyaqhubeka zisetyenziswe kwiinkalo ezahlukeneyo zeeyeza ezibandakanya, kodwa zingagqithwanga, iziyobisi ekunyangeni uxinzelelo lwegazi oluphezulu, unyango lwe-stroke, i-anesthetics jikelele, izidakamizwa ezichasene ne-malaria kunye nokuxilongwa kwe-HIV. . Ingqwalasela yethu kweli nqaku i-2-chloro-5 methylpyramidine kunye nokusetyenziswa kwayo njengomphakathi
Ukusetyenziswa kunye nezicelo 2- Chloro-5-methylpyramidine
Ngokuqhelekileyo isetyenziswe kwi-organic synthesis; esetyenziswa ngokuqhelekileyo njenge-pesticide intermediate efana ne-acetamiprid, imidacloprid, njenge-herbicide kunye ne-bactericide. Isetyenziswe kwakhona njenge-intermediate intermediate, i-agent echithwayo kunye ne-petrochemical additive. I-2- I-Chloro-5- methylpyramidine isetyenzisiwe ekwenzeni iindidi ezintsha ze-neonicotinoid ezisebenzayo. Ezinye izinto ezisetyenziswayo kwi-Agro synthesis synthesis ziquka ukwenza: Imidacloprid, Acetamiprid, Nitenpyram, NTN32693. Ezi zibonakalise kakuhle kwiifama zombini kunye nezoshishino ukutshabalalisa izinambuzane ezinobungozi kwiziqhamo, imifuno okanye izityalo zokutya.
Ezinye iimveliso zamakhemikhali ukuba i-2-Chloro-5 methylpyramidine ingasetyenziselwa ukwenza iquka:
I-2-Chloro-5 i-methylpyramidine iyaziwa ukuba iyomeleleka ngokwemithi xa igcinwa phantsi kweemeko ezicetywayo: Kwiqondo lokushisa. Ungazami ukusebenzisa i-aluminium okanye i-containers egxininisiweyo, njengoko i-compound iya kuthathelwa njani nale nto ukuvelisa igesi ye-hydrogen ekugqibeleni ibe ngumxube wokuqhuma umoya. Qinisekisa ukuba uhlola izitya rhoqo ukufumana kwaye uthabathe naluphi na ukuchitheka okanye ukuvuza.
Ngenxa yobume bayo nobunzima, i-2-chloro-5-methylpyramidine ingahanjiswa ngumoya okanye ulwandle. Isebenza ngamandla kakhulu nge-hydrogen oxides, i-carbon oxides, ne-nitrogen oxides, ngoko ke kucetyiswa ukuba ukhethe izithuthi okanye iindlela zokugcina ngaphandle kokungabikho kwezi zinto. Iimpahla kufuneka zigcinwe zivalwe ngokuqinile, kwindawo epholile kunye nomoya ophelileyo
Ukusingathwa ngokufanelekileyo, ukuKhuselwa okuKhuselekileyo, ukuLahlwa kunye neMilinganiselo yokuLwa komlilo
Njalo ugqoke iimpahla zokukhusela ezifana neiglavu ezikhuselekanga ngamakhemikhali kunye nezikhuselo zokukhusela xa usebenza nazo 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) ukuphepha ukunxibelelana ngamehlo okanye kwesikhumba. Gwema ukukhupha impazamo, umphunga okanye igesi: Yisoloko uyisebenzise kwindawo efanelekileyo yomoya. Ukuqhuma kwe-inhalation kuye kwafakazelwa ukuba nemiphumo emibi yempilo. Njengamaxesha onke, zama ukukwenza ucoceko olulungileyo lwezoshishino kunye nokukhuseleko.
Nangona kunjalo, xa kwenzeka ukugwinya ngengozi: Gcoba umlomo ngamanzi uze udibane nodokotela. Kwimeko yokukhubaza: Hambisa umntu ochaphazelekayo emoyeni omtsha kwaye ukuba abaphefumli, qhubeka nokulawula ukuphefumla, kwaye uxoxe nodokotela. Ukuthintana kwesikhumba ngokukhawuleza, hlamba indawo echaphazelekayo ngeesepha kunye namanzi ubuncinci imizuzu elishumi elinesihlanu kwaye ususe nayiphi na impahla okanye izicathulo ezingcolileyo. I-2- chloro-5- methylpyrimidine ingatshisa isikhumba okanye ibangele ubuzwe. Qhubeka udibana nogqirha.
I-2- chloro-5-methyl pyrimidine kufuneka ilahlwe njengemveliso ekhethekileyo. Oku kuthetha ukuba amalungiselelo akhethekileyo kufuneka afakwe, esebenzisa inkampani yokulahlwa kwelayisenisi ngokuqhagamshelana negunya lokulahla kwendawo yokulahlwa kwenkunkuma ukuze uqinisekise ukuthotyelwa komthetho wesizwe kunye nommandla. I-compound ayifanele ikhutshwe kwi-drain, kwaye xa kwenzeka i-spill ye-spill, i-vermiculite kwisitya esitywinwe kwaye uchithe ngokufanelekileyo.
Ukucima umlilo ngenxa ye-2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) Umlilo ungasebenzisa izicima zomlilo zomichiza owomileyo, iCarbon (IV) i-oxide, i-polymmer foam okanye izicima-mlilo ezixhatshayo. Ukuba kuyimfuneko, umntu kufuneka agqoke izixhobo zokulwa zomlilo kunye nezixhobo zokuphefumula ukunciphisa umngcipheko wokutshisa.
Ngokubhekiselele kwimilinganiselo yokunciphisa umsebenzi, i-2- chloro-5-methylpyramid ayinalo ukulinganiselwa okunjalo. Uqaphelo oluqhelekileyo olunjengeenkompe zomshumbisi weekhemikhali zeenjini zinconywa ngexesha lokuphatha.
egqithileyo ngeposi Previous: Alex Rodriges
Okulandelayo elilandelayo: Konke okumele ukwazi nge spiro compounds